Iflethi okanye indlu ekwicomplex - I-Airbnb
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguGunn
Siqeshisa ngeflethi okanye indlu ekwicomplex elungiswe ngokupheleleyo embindini weGeiranger. Iflethi inezixhobo ezifanelekileyo ezifana nekhitshi elinento yonke, igumbi lokuhlambela elineshawa nomatshini wokuhlamba impahla, amagumbi okulala amabini anezinto ezinokwenziwa kwiwardrobe.
Siqeshisa ngeflethi okanye indlu yethu ekwicomplex esandul 'ukulungiswa embindini weGeiranger. Iflethi inezixhobo ezintle ezifana nekhitshi elinento yonke, igumbi lokuhlambela elineshawa nomatshini wokuhlamba impahla, amagumbi okulala amabini anezinto zokugcina.
Iflethi isembindini weGeiranger, kwimizuzu eyi-5 ukusuka embindini wedolophu ngemoto (imizuzu eyi-15 xa uhamba ngeenyawo). Oku kukunika umgama omfutshane kwizinto ezininzi ezifumaneka kwiGeiranger njengeevenkile, iimyuziyam, ukunyuka intaba, ipaki yezinto ezenziwayo, indawo yokujonga, iivenkile zokutyela njl. Kwangelo xesha, iyakuvumela ukuba uphumle uze uphumle. Iflethi inamagumbi okulala ayi-2, igumbi lokuhlala elidityanisiweyo kunye nekhitshi kunye negumbi lokuhlambela elitsha elineshawa. Ithivi, i-intanethi yasimahla kunye nendawo yakho yokupaka. Apha, yonke into isesandleni sakho ukuze ube neholide emnandi e-Geiranger entle.
Iflethi isembindini weGeiranger, imizuzu eyi-5 ukusuka embindini ngemoto (imizuzu eyi-15 xa uhamba ngeenyawo). Oku kukugcina ukufutshane nezinto ezininzi ezifumaneka kwiGeiranger njengeevenkile, imyuziyam, ukunyuka intaba, ipaki yezinto ezenziwayo, iindawo zokujonga, iivenkile zokutyela kunye nokunye. Kwangelo xesha, ikunika ithuba lokuthatha umhlala-phantsi uze uphumle. Iflethi inamagumbi okulala ayi-2, igumbi lokuhlala elidityanisiweyo kunye nekhitshi kunye negumbi lokuhlambela elitsha elineshawa. Ithivi, i-intanethi yasimahla nendawo yakho yokupaka imoto enye. Yonke into ilungiselelwe iholide emnandi e-Geiranger entle.
42" TV ene-I-Chromecast, I-Apple TV
Iindawo ezikufutshane ezimnandi nezinokuthi cwaka.
Umbuki zindwendwe ngu- Gunn
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Stranda